ओलीलाई सर्वाेच्चले दियो एकैदिन तीन झड्का « Sagarmatha Daily News
ओलीलाई सर्वाेच्चले दियो एकैदिन तीन झड्का
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले आज ३ वटा फैसला दिएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर कारवाहीमा परेका ४ सांसदको पद पुर्नबहाली र एमाले महाधिवेशन कमिटिलाई अवैधानिक घोषणा गरी तीन वटा झड्का दिएको हो । तीन वटै फैसलाहरु आजै भएका हुन् । यस्तै आजै गण्डकी प्रदेशमा ओलीका नजिकका सारथी पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार पनि विश्वासको मत नपाएर ढलेको छ ।
झड्का १. एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक- सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । गत फागुन २३ मा सर्वाेच्चले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्यूँताएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एमाले ब्युँताएका थिए ।
सोही दिन बैठक बस्दै उनले विधान परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटि बनाएका थिए भने माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो सँगै ओलीले अब एमालेलाई नेपाल पक्षले माग गरेअनुसार नै जेठ २ गतेबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
झड्का २. सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लार क्रस गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै चार संसदलाई बर्खास्त गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेखेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही सांसदमा पुनर्वहाली भएका हुन् । सांसद नन्दबहादुर बुढा समेतले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीवार पद यथावत राख्न आदेश दिएको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गरेको थियो । सर्वोच्चले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट नभएको कारवाहीलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
झड्का ३. नागरिकता अध्यादेश खारेज- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।